Macluumaad soomaali ah oo ku saabsan koroonada Noorway - helsenorge.no
Talooyin iyo xeerar heer qaran ah
Macluumaad Soomaali ah oo ka socda dawladda Norway oo ku saabsan xeerarka, talooyinka iyo soo jeedimaha la xiriira xaaladda covid-19 ee Norway.
Waxa boggu ka kooban yahay
Talooyinka guud ee ka hortagga is-qaadsiinta cudurka:
Calaamadaha cudurka koroonaha
Dhibaatooyinka covid-19 ku reebo qofkuu ku dhacay
Iska baadhista fayruska koroonaha
Miyaad wax su'aalo ah ka qabtaa ku saabsan covid-19 Agaasinka Caafimaadka Norway taleefanka macluumaadka hadda waa af-Soomaali! Wac 815 55 015.
Guriga joog markaad xanuunsanayso
Marar badan gacmaha dhaq
Calaamadaha fayrusta koroonadu waxay noqon karaan xummad, qufac, neefsashada oo qofka ku adkaata, madax-xanuun, daal, hoos u dhaca dareemaha dhadhanka iyo urta iyo muruq-xanuun. Cunaha oo qofka xanuuna, sanka oo dareera ama cabudha iyo hindhiso ayaa ka mid noqon kara calaamadaha.
Waxa wacan in aad iska qaado tijaabo haddii aad ka shakisan tahay inaad qabto calaamadaha cudurka koroonada.
Maxaan sameeyaa haddii aan isku arko calaamado?
Joog guriga haddii aad xanuunsanayso.
Haddii aad xanuunsanayso oo u baahan tahay caawimo dhaqtar, ama u baahan tahay in dhaqtar ku siiyo talooyin, la xidhiidh dhaqtarkaaga.
Dadka qaar ayaa dareemi kara dhibaatooyin covid-19 ku reebay. Dhibaatooyinka inta badan qofka ku dhacaa waa daal iyo caajis, dhibaato ku timaada wax-xoog-saarista iyo xasuusta, in qofku dareemo wareer iyo neefsashada oo ku adkaata, madax-xanuun, iyo hoos u dhac ku yimaada dareemaha urta iyo dhadhanka.
Halkee iskaga qaadii karaa tijaabada koroonada?
Iska ayaad tijaabo iska qaadi kartaa adigoo isticmaalaya tijaabada qofku iskii iska qaado. Waxaad kale oo aad tijaabo PCR ah iskaga soo qaadi kartaa xarun tijaabo-qaadis oo ku taalla degmada.
Halkan ka eeg bogga degmada aad joogto.
Maxaan sameeyaa haddii baadhotaanka aan iska qaaday iu sheego inaan cudurka qabo?
Guriga joog markaad xanuunsanaysid.
Dadka kuu dhow ayaad u sheegi kartaa inaad cudurka qabtid, si iyaguna ula socdaan inay dareemaan calaamadaha cudurka.
Tijaabo PCR ah oo xaqiijin ah
Dadka qaar ayaa tijaabo PCR ah oo xaqiijin ah iskaga qaadi kara xarun tijaabo-qaadis si loo hubsado natiijada baadhitaanka
Arrintani waxay khuseysaa:
Qof kasta oo qaatay irbadda tallaalka ee xoojinta ah (irbadda 3-aad), ee u baahan tijaabo xaqiijinaysa inuu cudurka qaaday si uu u helo shahaado koroona oo shaqaynaysa.
Qof kasta oo qaatay labo irbadood oo tallaalka islamarkaana koroona ku dhacay in ka badan 3 bilood ka hor.
Carruurta ka yar 16 sano (ee aan tallaalnayn oo islamarkaana u baahan shahaadada koroonaha).
Dhammaan dadka difaaca jidhkoodu daciifsan yahay.
Haddii aad rabtid gargaar caafimaad oo dhaqkhtarkuna rabo in lagaa qaado tijaabo PCR ah oo hubin ah.
Tijaabadaas waxa lagu qaadayaa meesha ku siinaysa gargaarka caafimaad.
Tallaalku wuxu qofka ka difaacayaa in uu si xun ugu xanuunsado koroonaha. Hay’adaha caafimaadka ee Norway waxay ku talinayaan in qof kasta oo awoodaa qaato tallaalka.
Degmada aad deggan yahay ama aad joogtid ayaa ka masuul ah in ay ku siiso tallaalka koroonaha. Tallaalku waa bilaash, qofka ayaan dooranaya in uu qaato iyo in uu iska daayo.
Qof kasta oo Norway joogay in muddo ah waxa uu xaq u leeyahay tallaalka, iyadoo aan la eegayn in uu sharci leeyahay iyo in kale.
Machadka Caafimaadka Dadweynuhu (FHI) wuxu hadda ku talinayaa in haweenka uurka leh qaataan tallaalka koroonaha, waxaana hadda irbad saddexaad oo tallaalka ah loo fidinayaa dadka 18 sano ka weyn. Dadka difaaca jidhkoodu hooseeyo waxa loo fidinayaa irbad 4-aad oo tallaalka ah.
Haddii aan lagu siinin fursadda is-tallaalista, la xidhiidh degmadaada. Waxaad xaq u leedahay in aad hesho turjumaan marka lagu siinayo adeegyada caafimaadka ee Norway.
Tallaalka koroonaha ee carruurta iyo dhallinyarada
Carruurta iyo dhallinyarada ka yar 17 sano waa ay heli karaan tallaalka koroonaha. Si la mid ah waxa hadda tallaalka heli kara carruurta jirta 5-11 sano, laakiin maaha talo guud oo ka soo baxday Machadka Caafimaadka Dadweynaha.
Waalidka ayaa gaadhaya go'aanka rasmiga ah ee ku saabsan in la tallaalo carruurta 16 sanno ka yar.
Cinwaanka filimo warbixin ah oo ku saabsan tallaallada koroonaha. Halkan waxad ka helaysaa jawaabo ku saabsan waxa tallaal yahay, qaabka uu u shaqeeyo iyo sababta la isu tallaalo.
Sidee tallaaladu u shaqeeyaan?
Waa maxay sababta aan uga tallaalno covid-19?
Xataa marka la tallaalan yahay waxa muhiim ah in lagu dhaqmo xeerarka guud ee ka hortagga faafidda cudurka.
Tegitaanka ama ka imaanshaha waddanka dibeddiisa
Ma jiraan xayiraado ku saabsan soo gelidda Norway.
Waddamada kala duwan waxay lahaan karaan xeerar kala duwan oo ku saabsan soo gelidda waddankooda. Taas darteed waa muhiim inaad sii ogaato xeerarka ka jira waddanka aad u dhoofayso.
Waxa ku qoran waxaa soo diyaariyay Helsedirektoratet
Markii ugu dambaysay ee la cusbonisiiyay Arbaco, Bisha Afraad 20, 2022